Kutanga Mabhizinesi Konetsa Vachiri veChidiki
GWERU — Nekuda kwekuti mamiriro ezvehupfumi munyika ari kuramba asina kumira zvakanaka, makambani akawanda ari kuramba achitadza kunyatsoshanda zvakanaka mamwe achivhara, izvo zviri kuita kuti kushaikwa kwemabasa kuenderere mberi.
Asi rimwe sangano revechidiki muGweru rinoti rine zano rinobatsira kuvamba makambani anobudirira izvo zvinogona kuita kuti vechidiki vawane mabasa.
Kunyange hazvo hurumende yakavamba homwe yekubatsira vechidiki, ye Youth Development Fund, yekuti vavambe mabhizimisi avo, vazhinji vanochema nerekuti mari iyi haiwanikwe nevakawanda, ukuwo hurumende ichiti vechidiki ava vari kutadza kunyora magwaro akati tsvikiti ekukumbira mari kuhomwe iyi.
Nekuda kwekuona matambudziko akatarisana nenyika panyaya dzekushaikwa kwemabasa, vamwe vechidiki muGweru vakatanga sangano rine chinangwa chekuda kubatsira vane shungu dzekutanga mabhizimisi kuti vaite izvi vachibudirira, nenzira inoziikanwa muchirungu kunzi business incubation.
Mukuru wesangano re Global Appeal for Accelerated Youth Empowerment and Develeopment, VaGlorious Makumbe, vanoti donzvo resangano ravo nderekupa vechidiki ruzivo.
VaMakumbe vanoti hupfumi munyika hauna kumira zvakanaka uye kuti nyika inoda vekunze vanosima mari yavo munyika kuti hupfumi husimukire.
Kunyange zvakadaro VaMakumbe vanoti vane chivimbo chekuti hurongwa hwesangano ravo hwekuda kubatsira vanoda kutanga mabhizimisi kana makambani nenzira yekuvabatsira kutsvaga mari pamwe nekuvapa hunyanzvi hwavanoda hunobudirira nekuti bhodhi resangano ravo rine vamwe vanhu vanoziikanwa zvikuru munyika nekuda kweruzivo rwavainarwo mune zvemabhizimisi.
Vamwe veavo vari mubhodhi iri ndimuzvinabhizimisi Amai Divine Ndhlukula, vaimbove mukuru weBarclays Bank, Amai Charity Jinya, pamwe namuzvinabhizinesi VaPattison Sithole.
Kubatsira vanoda kutanga mabhizimisi kana makambani nenzira yekuvabatsira kutsvaga mari pamwe nekuvapa hunyanzvi hwavanoda kwagara kuchiitwa munyika dzakawanda kusanganisira dzakabudirira dzeBritain neAmerica pamwe chete neChina neJapan.
Mudzidzisi wezvehupfumi nebudiriro paMidlands State University, VaMartin Charumbira, vanoti chinowanzoita kuti mabhizimisi kana makambani anotangwa nevechidiki azokundikana kana kusakura, inyaya yekuti vanenge vasina ruzivo rwakakwana.
VaCharumbira vanoti business incubation ipfungwa yakanaka uye inogona kubatsira zvikuru vechidiki pakuita mabhizimisi sezvo vachinge vachizobatsirwa nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuramba wachiwana mazano nehunyanzvi hwekuti mabhizimisi aya arambe achisimukira.
VaTrust Chikohora ndimuzvinabhizimisi wemuGweru varizve munyori mukuru weComesa Business Council. VaChikohora, avo vaimbovewo mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce, vanobvumawo kuti chirongwa che business incubation chinogona kubatsira nyika.
Dzimwe nyanzvi mune zvehupfumi dzinoti pasina kugadziriswa kwehukama pakati peZimbabbwe nenyika dzekumadokero, hupfumi hwenyika hucharamba huchitatarika zvisinei kuti pabuda mazano akanaka sei mukuedza kusimudzira hupfumi.